देशका धेरै ठाउँमा वर्षा, सतर्क रहन महाशाखाको आग्रह ! – Sodhpatra
देशका धेरै ठाउँमा वर्षा, सतर्क रहन महाशाखाको आग्रह !
प्रकाशित : २ भाद्र २०७८, बुधबार ०८:०० August 18, 2021
काठमाडौं: आज बुधबार देशभर बदली रही धेरै स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुने सम्भावना छ ।
आज राति १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुन सक्ने छ ।
अहिले देशभर बदली रही केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ । बिहीबार देशभर बदली रही धेरै स्थानमा वर्षा हुने छ । प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भने मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
बिहीबार राति प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकरदुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुन सक्ने छ ।
त्यस्तै शुक्रबार देशभर बदली रही धेरै स्थानमा वर्षा हुनेछ । प्रदेश १ का केही स्थानमा भने मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुन सक्ने छ । जसका कारण पहिरो तथा गेग्रान बहाव एवं नदीनालामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन महाशाखाको आग्रह छ ।